December 2017 « A.S.M.A
Arakan Student Monks Association (A.S.M.A),Thailand
၂၄. ၁၁. ၂၀၁၇ နေ့မှစ၍ ၂၀၁၇/၈ ပညာသင်နှစ်အတွင်း အသင်းဝင်သံဃာတော်များ၏ ပညာရေးရာ၊ ကျမ္မာရေးရာ စသောကဏ္ဍများကို တာဝန်ယူထမ်းဆောင်ရန် တာဝန်လွှဲအပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်မှာ ယနေ့ ၂၄. ၁၂. ၂၀၁၇ ဆိုလျှင် (၁) လ တင်းတင်းပြည့်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံပါ စာသင်သား ရဟန်းသံဃာတော်များသည် A.S.M.A အသင်းကြီး၏ အလုပ်အမှုဆောင် တာဝန်ခံများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ASMA-Executive Committee (2017/8)
ASMA-အလုပ်မှုဆောင်ကော်မတီ ၂၀၁၇/၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် သံဃာ့အကျိုးဆောင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း ၁-လ တင်းတင်းပြည့် အမှတ်တရ။
ASMA ကော်မတီ ၂၀၁၇/၈ ပညာသစ်နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း (၁) လ ပြည့်အမှတ်တရ
Posted by Arakan politician | No comments
8:54 AM Share:
"A.S.M.A- နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်း အမှတ်စဉ်(၂) ဖြစ်မြောက်ရေး
( 11.12.2017 -Academic Year)
4:24 AM Share:
“A.S.M.A၏ အမှတ်စဉ်(၂) နှစ်ပါတ်လည် မဂ္ဂဇင်းအတွက် စာမူဖိတ်ခေါ်ခြင်း”
A.S.M.A နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်းဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ
A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့(ထိုင်း)မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေမည် ဖြစ်ပါသောကြေင့် စာပေဝါသနာရှင်များ၊ အတတ်ပညာရှင်များ၊ အသိပညာရှင်များ၊ စာရေးဆရာများအား လေးစားစွာဖြင့် စာမူများကို အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်း ဆက်သွယ်ပြီး ပို့ပေးကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
2) ဆောင်းပါး (သုတ/ရသ)
3) ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး/ကဗျာ (ဓမ္မ/ သုတ/ရသ)
4) ဝတ္ထုတို/ရှည် (ဘာသာရေးသုတ/လူမှုရေးသုတ)
စာမူရှင်များသည် အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များအားလိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။
1) မြန်မာစာအရေးအသားနှင့် Zawgyi font-size (11) ဖြင့်ရေးသားရမည်။
2) ကဗျာစာမူသည် A4 (1) မျက်နှာ
3) ဆောင်းပါး စာမူသည် အနည်းဆုံး A4 (2)မျက်နှာမှသည် A4 (4)မျက်နှာထက်မပိုရ။
4) စာမူသည် မည်သည့် စာစောင်၊စာအုပ်များ၌ ဖော်ပြခံထားရဖူးသော စာမူမဖြစ်စေရ/မူပိုင်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံရမည်။
5) ဝတ္ထုတို/ရှည် စာမူသည် A4 (3)မျက်နှာထက်မနည်းစေရ၊ A4 (5)မျက်နှာထက်မပိုစေရ။
6) ပုဂ္ဂလိက ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှု၊ အသင်းအဖွဲ့များအား ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုများ စာမူများမဖြစ်စေရ။
7) စာမူရှင်သည် အယ်ဒီတာ-စာတည်းအဖွဲ့၏ တည်းဖြတ်မှုကိုကျေနပ်စွာ လက်ခံရပါမည်။
(1) စာမူရှင်အမည် ( ကလောင်အမည်)
(2) ဆက်သွယ်ရရှိနိုင်သော ဖုန်းနံပါတ်၊လိပ်စာ နှင့် E-mail
ပေးပို့ရန် Gmail လိပ်စာ
(1) ဦးဂန္ဓသာရ Ph: 0991268419
(2) ဦးတေဇသီရိ Ph: 0944197155
(3) ဦးပညာသီရိ Ph: 0902241019
(4) ဦးတေဇောဘာသ Ph:0990289181
(5) ဦးအဂ္ဂ (တက္ကသိုလ်) Ph: 0948896003
(6) ဦးသုန္ဒရ Ph: 0620655218
မှတ်ချက်/ / စာမူများကို အမြန်ဆုံးပို့ပေးနိုင်ပါလျင် ပို၍ ကောင်းပါသည်။
1:26 AM Share:
Arakan Student Monks Association (ASMA), Thailand
ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ ( ထိုင်းနိုင်ငံ )
Contact Ph: (+66) 0867943144, 0867958393, 0816764661
Facebook Account: https://www.facebook.com/asma.edu.10
7:05 AM Share:
ASMA- ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ (ထိုင်းနိုင်ငံ)၏ နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်း အမှတ်စဉ်(၂) ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ASMA- EC Sub-ကော်မတီဝင်များ ထပ်မံအားဖြည့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ။
10:15 AM Share:
ASMA ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့၏ (၈)ကြိမ်မြောက် ဗဟိုကော်မတီဝင်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပေးကြပါသော.....
၃။ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ပေးပါသော (၂၀၁၆/၁၇)ဗဟိုကော်မတီဝင်ဆရာတော်များ
၅။ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးကြပါသော ညီတော် နောင်တော်များအား (၂၀၁၇/၂၀၁၈) ခုနှစ်အတွက် ရွေးကောက်ခံ ASMA-ဗဟိုကော်မတီမှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ဘုရားတပည့်တော်တို့ ASMA-ဗဟိုကော်မတီဝင်များအနေဖြင့်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် ပညာသင်ကြားနေကြသော မိမိတို့၏ ညီတော်နောင်တော်များအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပေးသည့်အပေါ် လွန်စွာမှဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း၊
မိမိတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့်ကာလတစ်လျှောက်တွင်လည်း သံဃာ့မေတ္တာ၊ သံဃာ့စေတနာကိုခံယူလျှက် စွမ်းနိုင်သလောက်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သွားပါမည်ဟု သန္ဒိဋ္ဌာန်ချထာပါကြောင်း ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် ကျေးဇူးစကားကိုပြောကြားလိုက်ရပါသည်။
7:44 PM Share:
"ASMA-ဗဟိုကော်မတီဝင်များ၏ ကျေးဇူးစကား"ASMA ရခိုင်...
ASMA- ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ (ထိုင်းနိ...
“A.S.M.A၏ အမှတ်စဉ်(၂) နှစ်ပါတ်လည် မဂ္ဂဇင်းအတွက် စာ...
"A.S.M.A- နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်း အမှတ်စဉ်(၂) ဖြစ်မြောက...
ASMA ကော်မတီ ၂၀၁၇/၈ ပညာသစ်နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း...